तेश्रो तलाबाट ख’सेर मृ’त्यु भएका प्र’हरीको अन्तिम शो’क स’लामी यसरी गरियो (भिडियो सहित) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. तेश्रो तलाबाट ख’सेर मृ’त्यु भएका प्र’हरीको अन्तिम शो’क स’लामी यसरी गरियो (भिडियो सहित) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
तेश्रो तलाबाट ख’सेर मृ’त्यु भएका प्र’हरीको अन्तिम शो’क स’लामी यसरी गरियो (भिडियो सहित)
पोखरा सराङ्कोटमा ड्युटीमा खटिएका प्र’हरीको ३ तला माथिबाट ल’डेर ज्या’न गएको छ ।
पोखरा वडा नम्बर १८ सराङ्कोटमा रहेको वडा कार्यालयको भवनसँगै रहेको तेश्रो तलामा रहेका प्र’हरी जवान ठग बहादुर आलेको ३२ वर्षको उमेरमा नै ज्या’न गएको छ।
२०६४ सालमा प्र’हरीमा भर्ती भएका गोरखाका आले एक वर्ष अगाडि देखि सराङ्कोटमा थिए । उनी ल’डेपछि साथीहरुले उ’द्धार गरी उपचारका लागि मनिपाल अस्पताल लगेकोमा डाक्टरले मृ’त्यु भइसकेको घो’षणा गरेका हुन् । प्र’हरी भवन नहुँदा जवानहरु वडा कार्यालयमा बसदै आएका थिए। मंगलबार बिहान ३ बजेको समयमा ख’सेका आलेले कास्की प्र’हरीका प्रवक्ता सुवास हमालका अनुसार कुनै म’धिरा लगाएतका केहि पनि पदार्थ सेवन गरेका थिएनन। प्र’हरी रहेकै भवनमा सहकारीको सिसि क्यामेरा भएको हुनाले पनि छिटैनै घ’टनाको कारण खुल्ने परिवारले आशा गरेका छन।
आलेलाई सुरुमा पोखराको मणिपाल अस्पताल लगिएको थियो भने हिजो मात्रै उनको श’व पोस्ट’मार्टमको लागि पोखरा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल लगिएको थियो। घ’टनाका सम्बन्धमा अनु’सन्धान भइरहेको र पोस्ट’मार्टम रिपोर्टपछि थप कुरा खुल्ने कास्की प्रहरीले जनाएको छ | यस्तै आज बिहान मात्रै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल परिसरमा नेपाल प्र’हरीको बिशेस टोलीले शो’क श’लामी अ’र्पण गरी अन्तिम श्र’धान्जली अ’र्पण गरेको छ। आलेको श’वलाई आज नै उनको आफन्त परिवारको जिम्मा लगाईएको थियो। श्र’धान्जली सभा पछि आलेको श’व आफन्तले बुझेका छन।
सुचना प्राप्त भएअनुसार आज नै आलेको अन्तिम श्रधा’न्जली अर्थात उनको नेपालकै प्रसि’द्ध तिर्थ स्थल देव’घाट धाम मा अन्त्य्स्ति गरिने छ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको February 18, 2021 February 18, 2021 1726 Viewed